Ukuzivocavoca uBongo- kunye nencinci ngeDoug | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 12, 2006 NgoMvulo, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Enye yezinto endizithandayo kakhulu kwiwebhu kukuba iwela umgca phakathi kobugcisa kunye neenkqubo. Kwiminyaka yam yesikolo samabanga aphakamileyo, ndandingumculi okhutheleyo… ndisoloko ndizobe into kwenye indawo. Kunyaka wam wokugqibela, ndaye ndathabatha izifundo zekholeji kuyilo loYilo. Uyilo luthathe kancinci inkululeko ngaphandle kwepensile yam, kodwa ndikonwabele kakhulu ukuchaneka koyilo. Ndayikhathaza iklasi kodwa andizange ndiyifumane kwikholeji.
Endaweni yoko ndazibandakanya noMkhosi wamanzi ndaza ndaba nguGcisa. Abantu abaninzi bamangalisiwe kukuba elidlulileyo landikhokelela kuThengiso, ukuThengiswa kweDatabase, uyilo lwewebhu, kunye noyilo lwesicelo seWebhu… kodwa yayiyindalo yendalo. Ingqiqo kunye noqeqesho olufunekayo ekusebenzeni ngoomatshini bombane kunye noomatshini be-elektroniki kundinike ukuqonda okuhle kunye namava okusombulula. Oku ekugqibeleni kukhokelele ekubeni ndiye kwikholeji yeTekhnoloji yezoMbane. Ngelo xesha, ndaqala ukusombulula ingxaki kunye nokuyila inkqubo yokuma kweleli kwii-PLC's (Abalawuli abaCwangcisiweyo beLogic). Oko kukhokelele kwindibaniselwano yePC, iNkqubo, ukuDityaniswa kweNethiwekhi, kunye nokuDityaniswa kweDatabase.
Ndayithanda bobabini itekhnoloji kunye nomzi mveliso endandikuwo… kwiPhepha-ndaba. Ndifuna ukushiya kwicala leMveliso yeshishini ndiye kwicala lokuThengisa kunye neNtengiso leshishini… kodwa xa umntu ekubona unxibe iyunifomu eblowu, kunzima ukufumana umsebenzi wokuThengisa. Ke… ndalayisha amahashe neenqwelo ndaza ndahambisa abantwana bam eNtshona, ndisebenzela inkampani yoGcino lweDatabase eyile, yakha kwaye yaphumeza iiNdawo zoLondolozo lweDatha kulo lonke eli Shishini leendaba. Kwakungumsebenzi onomdla. Ndikhe ndasebenza namanye amaphepha-ndaba amakhulu kwaye ndaye ndenza izicelo ezizodwa kolu shishino.
Ndabambelela kumzi mveliso kangangeminyaka elishumi kwaye ndazenzela kakuhle. Ndide ndonyulwa kushishino njengomnye wabaphambili abangama-20 abangaphantsi kweminyaka engamashumi amane. Utshintsho kulawulo apho luzise kancinci ugxininiso kwintengiso yedatha. Amaphephandaba ayeginywa yiminyaka elishumi yimibutho emikhulu, ke italente yeshishini yayingeyonto onokuyisebenzisa kwiphepha lasekuhlaleni. Ekugqibeleni ndaye ndagqiba kwelokuba ndilishiye iphephandaba, kunye nomzi mveliso ngasemva. Yayilinyathelo elinzima elo. Ngethamsanqa ndiye ndatyhala kancinci ekuphumeni. 🙂
Unyaka wam olandelayo ndiwuchithe ndinceda ezinye iinkampani zakha iinkqubo zazo kwaye ndaye ndagigig enkulu NgqoThagethi. Yinkampani emnandi, yenye yeenkampani zabucala ezikhula ngokukhawuleza eUnited States. Banemveliso esemagqabini kwaye ndicelomngeni ngoku ukuba ndiqhubeke nokwenza ngcono.
Ngamanye amaxesha akwanelanga, nangona kunjalo. Ndisenemincili ngokunceda i-Indianapolis Colts, i-Indianapolis Chamber of Commerce, ukubamba kunye nokuyila itoni yeziza zabahlobo kunye nabalingane, ukuthatha inxaxheba kwiminyhadala yeNtengiso, kunye nokuthatha imiceli mngeni emitsha. Ndincedisile ukwazisa Ndikhetha i-Indy!, indawo enengcambu apho abantu banokutsho khona ukuba kutheni bekhetha i-Indianapolis. Yisayithi efumana amandla. Ndikwasebenza ekusunguleni elam ishishini, iCompendium Software, kunye nelinye iqabane apho ndibeka khona ukubhloga kwam, itekhnoloji, kunye namava okuthengisa ukuba ndisebenze. Ndiyakuthanda ukusebenza ngokukhawuleza kwaye ndiyakuthanda ukusebenza nabantu abanesimo sengqondo 'esingenza'.
Ndiyakonwabela ukusebenzisa 'ingqondo yam yasekhohlo' kunye nokwenza imifanekiso ndisebenzisa iFotohop kunye ne-Illustrator. Kuthatha intwana yokuyila. Ngokuhlwanje, ndisebenze kwilogo yeqela lendawo, iRok Hollywood. Ndithumele oku kubo malunga neyure edlulileyo. Ndiza kuyenza kwakhona amaxesha ambalwa ngokusekwe kwingxelo yabo… kodwa njengoko ubona, ndiyonwaba:
Eyona nto iphambili kukuba ndina-38 kwaye andazi ukuba ndifuna ukuba yintoni xa ndimdala! Ndiyazi ukuba ndilunge kakhulu ekufumaneni izisombululo zobuchwephesha kwiingxaki ezinzima kakhulu, kunye nokufundisa abantu ngayo. Ndinomdla wokwenene wetekhnoloji. Andinawo umonde kubantu abenza izizathu, kodwa ndiyathanda ukunceda abantu abacela uncedo. Akukho nto indonelisa njengoncumo lobuso bomthengi.
NdinguKumkani wazo zonke iiNtengiso (ndiye ndavela kwiJack) kodwa andiseyiyo eyenye. Andikwazi ukuma kwezopolitiko, ngakumbi eofisini. Andikuthandi ukusebenza kwizinto ezingenazinjongo zinokubalwa. Ndiyazicaphukela iintlanganiso apho sihlangana khona kungekho njongo (ndibonisa kade kwaye ndizise iPDA yam ukuze ndikwazi ukwenza i-imeyile). Ndiyakuthanda ukusebenza emva kwexesha… elona xesha lam lokuvelisa livamise ukuba phakathi kwentsimbi ye-10: 20 ezinzulwini zobusuku. Kwaye ndiyakuthanda ukubetha i-snooze amaxesha angama-XNUMX kusasa.
Konke oku kwaye ndinguTata omnye! Ixesha nabantwana bam limnandi. Sisabona ii-movie xa sinako kwaye sihlala kunye kakhulu. Bobabini abantwana bam bayamangalisa. Owu, ndikhangele phambili kumhla wokuqala 'wekofu' ixesha elininzi kule mpelaveki… yinxalenye yengqondo yam le ndingakhange ndiyisebenzise kwithuba elithile ke ngoko ndinqwenelele ithamsanqa!
Kwanele ngam! Ixesha lokulala.
Sep 13, 2006 ngo-5: 21 PM
NdinguTata ongatshatanga kuninzi lwabantwana bamakhwenkwe abadala. Le yayiyeyona nxalenye imbi ngoqhawulo-mtshato - ndingababoni abafana bam ixesha elide. Ngoku bonke bakhulile, kwaye ndibabona nangaphantsi. Waxabise amaxesha.
Sep 13, 2006 ngo-5: 27 PM
Ndinexesha elininzi kunye nabo, iSterling. Ndinelungelo lokugcina abantwana. Esinye sezizathu sokuba ndikhethe i-midwest yayikukuba babone ngakumbi uMama wabo, otshatileyo kwaye uhlala eLouisville. Andiqinisekanga ngendenze ntoni ngaphandle kwabo!
Ndiyavuma kwakhona: Uqhawulo mtshato. Kubi kuye wonke umntu obandakanyekayo.